Luis Suarez Oo Sheegay Inuusan In Badan U Dulqaadan Karin Saxaafada UK isagoo Qirtay Xiisaha Real Madrid.
Weeraryahanka kooxda Liverpool Luis Suarez ayaa qirtay inay adag tahay inuu iska diido Real Madrid ka dib isagoo sheegay in sannadkan uu ku adkaa isaga iyo qoyskiisaba.
Xiddiga reer Uruguay ayaa si aad ah loogu tiriyaa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican ee ka xamaasha England, laakiin waxa uu dhibaato ku wajahay Ingariiska intii uu joogay Premier League, isagoo ganaaxyo sideed kulan iyo 10 kulan ah la kulmay.
Liverpool ayaa ku guuldareysatay inay u soo baxdo Champions League, sidaasi darteed ciyaaryahankii hore ee Ajax ayaa lala xiriirinayay kooxo dhowr ah oo ay ku jirto Real Madrid.
Iyadoo Suarez iyo dad badan oo xiriir la leh Liverpool ay aaminsan yihiin inuu jiro ajende saxaafada iyo FA-ga uga soo horjeedaan ciyaaryahanaka, waxa uu sheegay in laga yaabo inuu ka dhaqaaqo England.
“Waxaan la hadlay wakiilkeyga, waana adkaan doontaa in maya lagu dhaho Real Madrid” ayuu Luis Suarez ku sheegay wareysi uu siiyay idaacada Isbaanishka ee Cope iyadoo wareysigaas uu qaaday wariyahooda Latin America Martin Charquero.
“Waan ku faraxsanahay Liverpool, waan jeclahay kooxda, wax aan amaan aheyn uma hayo taageerayaasha laakiin sannadkan aad ayay ugu adkeyd, xaaskeyga iyo gabadheydaba.
“Waan la hadlay Brendan Rodgers waana uu ogyahay waxa aan rabo. Waxaan leeyahay qoys, gabar diyaarna uma ahi inay sidaan igula sii dhaqmaan saxaafada Ingariiska.”
Si kastaba, Suarez ayaa beeniyay inuu durbaba wadahadal kula jiro kooxda aan tababaraha laheyn ee Real Madrid sida lagu sheegayay saxaafada Spain.
“Ilaa iyo haatan wax dalab rasmi ah kama helin Madrid” ayuu yiri Suarez.
Suarez ayaa sidoo kale lala xiriiriyay Atletico Madrid, Juventus, Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain.
Tababare Manuel Pellegrini Oo Qiray In Hishiis Afka Ah Uu La Gaaray Kooxda Man City
Tababaraha ka sii tagaya kooxda Malaga ee Manuel Pellegrini ayaa daboolka ka qaaday in hishiis afka ah uu la gaaray kooxda Man City si uu u tababaro xilli ciyaareedka dame isaga oo galaya booska Roberto Mancini ee la casilay .
Isaga oo u waramayay Tv-ga Canal Sur ayuu yiri tababarahaan reer Chile ” dhab ahaantii waxaan Man City la gaaray hishiiska afka ah si aan u tababaro , waxaan rajeynayaa in arimaha sida la rabo ay u dhameystirmaan “.
” Illaa haatan wax hishiis ah ma saxiixin balse City waxa ay muujiyeen rabitaan ku aadan in ay helaan saxiixeyga , marar badanna waan wadahadalnay” ayuu sii raaciyay Manuel Pellegrini .
Waxa uu xaqiijiyay in weli arinta si rasmi ah loo soo afjarin ” haddii weli hishiis dhicin ma dhihi karno arinta waa la soo afjaray, weli ma dhamaan arinta”.
Manuel Pellegrini ayaa maalmo ka hor shaaciyay in uu ka tagayo Malaga isaga oo wadada u xaaranaya in horyaalka Ingiriiska uu aado waxaana si weyn magaciisa loola xariirinayaa kooxda Man City.
Warar horay ay u qoreen saxaafadda Ingiriiska ayaa sheegayay in Manuel Pellegrini uu hishiis laba sano ah uu u saxiixay kooxda Man City .
The Sun: Jose Mourinho Oo Heshiis Afar Sanno Ah U Saxiixay Chelsea.
Wargeyska The Sun ayaa sheegaya in tababare Jose Mourinho uu si rasmi ah qalinka ugu duugay heshiis afar sanno ah oo uu wadar ahaan Chelsea kaga qaadan doono 40 milyan ginni habeenkii talaadada.
Qof sarre oo ka tirsan Blues oo aan la magacdhabin oo uu soo xiganayo wargeyska The Sun ayaa yiri: “Waa rasmi Jose waa nin Chelsea ah mar kale. Qof walba waa uu ku faraxsan yahay inuu soo laabanayo, kooxda, ciyaartoyda iyo taageerayaasha waa ay ku faraxsan yihiin.
“Waxaan durbaba indhaha ku heynaa xilli ciyaareedka soo socda, waan hubnaa inuu noqon doono mid xiiso leh.”
Warkaan oo ay baahisay si gaar ah maanta jariirada The Sun ayaa iyadana waxa ay leedahay:
“The Sun waxa ay si gaar ah idinkugu sheegtay 3dii bishi May in macalinka Madrid Mourinho inuu ku soo laabanyo Bridge.
“Waxaana haatan shaacin karnaa in Mourinho uu ugu danbeyn qalinka ku duugay heshiiska labadii maalmood uu London joogay isbuucaan.”
Daniel Sturridge Oo Seegi Doona Kulanka Brazil Ka Dib Dhaawac Soo Gaaray Xalay.
Weeraryahanka England Daniel Sturridge ayaa seegi doona kulanka axada ee England ay la ciyaari doonto Brazil ka dib dhaawac canqowga ah oo ka soo gaaray kulankii ay xalay barbaraha 1-1 la galeen Ireland.
Weeraryahanka Liverpool ayaa abuuray goolkii barbaraha ee uu dhaliyay Frank Lampard, waxaana garoonka looga saaray bareelo qeybtii hore ee ciyaarta, iyadoo Roy Hodgson uu ka cabsi qaba in jeex uu ka galay canqowga.
“Ma uu aadi doono Brazil” ayuu yiri Hodgson.
“Si wacan ayuu ku bilowday, waana ka mureygsanahay inuu naga dhaawacmo.
“Ma uusan ciyaarin in muddo ah isagoo dhaawac yar qabay. Waxaana ka baqayaa inuu maqnaan doono isbuucyo yar.”
Hodgson ayaa weeraryahano yari ay heysaa kulanka Maracana Stadium ay kula ciyaarayaan Brazil.
Andy Carroll ayaa dhaawac ahaan xilli hore looga saaray, halka Danny Welbeck uusan taam buuxda aheyn, Hodgson ayaana heysan wax kale oo aan ka aheyn inuu ciyaarsiiyo Rooney iyo Defoe.
Mark Hughes Oo Loo Magacaabay Macalinka Stoke City, Iyo Jamaahiirta Kooxda Oo Durba Ku Baaqay In La Ceyriyo.
Stoke City ayaa xaqiijisay inay tababaraheeda cusub u magacowday Mark Hughes kaasoo saxiixay heshiis seddex sanno ah.
Tababarihii hore ee Wales, Blackburn, Manchester City, Fulham iyo QPR ayaa qaban doona hogaanka Britannia Stadium ka dib markii ninka ay isku wadanka yihiin Tony Pulis uu kooxda ka tagay 7 sanadood uu la joogay ka dib.
Weeraryahankii hore ee Manchester United Hughes oo 49 jir ah ayaa shaqo la’aan ahaa tan iyo bishii November markii laga ceyriyay QPR ka dib 11 bilood oo adag oo soo martay.
Ka hor inta aan si rasmi ah loogu magacaabin macalinka cusub ee Stoke City, taageerayaasha Stoke City ayaa sii bilaabay mudahaaradkoosa ku aadan Mark Hughes, iyagoo boorar ay ku qoran yihiin ‘Hughes ha baxo’ (Hughes Out!) soo bandhigay.
Waxaana ay taasi cadeyneysaa in Hughes ay shaqo badan u taalo inuu ku soo jiito taageerayaasha Britannia Stadium xilli ciyaareedka soo socda.
Borussia Dortmund Oo La Soo Hishiisay Daafacii Kooxda Werder Bremen Ee Papastathopoulos. .
Madaxa ciyaaraha ee kooxda Borussia Dortmund Michael Zorc ayaa shaaca ka qaaday in kooxda ay hishiis la soo galeen daafacii kooxda Werder Bremen ee Sokratis Papastathopoulos .
Sokratis Papastathopoulos ayaa saxiixay hishiis sano ah iyadoo xilli ciyaareedka dambe uu u bilaabanayo.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay in Sokratis Papastathopoulos hishiis la soo gaarnay, dhinacyo badan oo daafaca ah ayuu ka ciyaara karaa” ayuu yiri madaxa ciyaaraha ee kooxda Borussia Dortmund ee Michael Zorc .
Papastathopoulos ayaa horay ugu soo ciyaaray kooxaha Genoa iyo Milan ee horyaalka Talyaaniga ka hor inta xagaagii 2011-ka uusan ku biirin kooxda Warder Bremen .
Waxa uuna u ciyaaray kooxdaan 59-kulan oo horyaalka Jarmalka ah iyadoo uu u dhaliyay laba gool.
Hishiiska daafacaan ayaa imaanaya xilli daafacii Borussia Dortmund ee Santana uu hishiis u saxiixay kooxda Schalke
Edmilson Oo Loo Xilsaaray Inuu Neymar Ka Caawiyo Inuu Saldhigto Barcelona.
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Barcelona Edmilson ayaa noqon doona midka lagu aaminayo inuu caawiyo Neymar marka uu si rasmi ah u la midoobo kooxdiisa cuusb.
36 jirkaan burburiyaha ahaa ayaa u soo ciyaaray Barcelona intii u dhaxeysay 2004 iyo 2008 ka hor inta uusan u dhaqaaqin Villarreal, waxaana uu u sheegay Esports COPE waxa uu noqon doono doorkiisa la taliye ee ciyaaryahanka reer Brazil.
“Waxaan Barcelona joogi doonaa laga bilaabo bisha September si aan marka hore ugu caawiyo Neymar inuu kooxda saldhigto. Saaxiib ayaan la ahay aabihiisa iyo wakiiladiisa.
“Waxaan la hadlay madaxweynaha Barca Sandro Rosell, waxaana u sharxay Neymar wax walba oo kooxda ku saabsan, Catalonia iyo sida ay u ciyaaraan saaxiibadiisa cusub. Waxaan caawiyay qoyska ciyaaryahanka iyo sidoo kale Barcelona” ayuu yiri.
“Neymar waa uu cadeeyay inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Barcelona waana uu ku faraxsan yahay. Aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu la ciyaaro ciyaartoyda adduunka ugu fiican. Shaki iigam jiro inuu guulo la gaari doono kooxda.”
Wakiilka Bale: Gareth Bale Waa Uu Ka Fiican Yahay Neymar, Waana Dhageysan Doonaa Dalabka Real Madrid.
Real Madrid ayaa diyaar u ah inay soo gabagabeyso xiisaheeda mudada dheer ee Gareth Bale iyadoo wakiilka xiddiga Spurs uu sheegay inay dhageysan doonaan dalab kasta oo ka yimaada kooxda reer Spain.
Real ayaa ciyaaryahanka reer Wales waxa ay ka dhigatay muhiimadooda koowaad xagaagan suuqa kala iibsiga ka dib markii ay seegeen xiddiga reer Brazil Neymar kaasoo go’aansaday inuu ku biiro kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona.
Wakiilke Bale, Jonathan Barnett ayaa u sheegay Barnaamij ka baxa Tv Isbaanish ah Futboleros inay dhageysan doonaan hadii madaxweynaha Real Florentino Perez uu soo waco.
Barnett ayaa yiri: ‘Haddii qof sida Mr Perez uu xiiseynayo Bale waxa ay ahaan laheyd sharaf weyn. Waana dhageysan doonaa.
“Cidna lama hadleyno… Bale waa uu ka fiican yahay Neymar. Waa uu cadeeyay inuu ka fiican yahay Neymar. Waxaana uu taas ku cadeeyay horyaalka ugu fiican adduunka.
“Waxaan rajeynayaa in kooxda kasta oo dooneysa, ay u dooneyso si rasmi ah oo aysan aheyn inay waayeen Neymar. Waxaan ku fekerayaa inuu yahay dooqooda koowaad.
“Dhageyso, waa waali laakiin wax walba oo uu yahay qiimaha Neymar, Gareth Bale waxa uu u qalmaa in ka badan.”
Wargeysyada Isbaanishka ee Marca iyo AS ayaana saaka cadadkoodii soo baxay boga hore ku soo sharaxay sawirada Bale.
Marca ayaa ku tilmaamtay ceyrsashada Real ee Bale ‘Howlgalkii Zidane’, halka AS ay iyadana bogeeda hore ku soo qortay ‘Bale waa xabada dahabka ah’.
Daily Star : Real Oo Kordhisay Qiimaha Ay Ku Doonayaan Bale Xilli Ay Gaarsiiyeen 70-milyan Oo Euro.
Sida wargeyska Daily Star uu qorayo naadiga Real Madrid ayaa u diyaar garoobaya in hishiiska Gareth Bale ku soo afjaraan laba todobaad gudahood .
Wargeyska waxa uu sheegayaa in Madrid ay soo bandhigeen qiimo gaaraya 70-milyan oo euro si saxiixa laacibkaasi loo soo afjaro.
Warar ayaa sheegaya in 15-ka July tahay maalinta aad loogu badinayo in hishiiska Gareth Bale iyo Real Madrid uu dhacayo.
Tottenham ayaa dhankooda isku dayaya in Bale ay ku qanciyaan in hishiis cusub u saxiixo kooxda , iyadoo ay u soo bandhigeen mushaar kordhin iyadoo halkii xilli ciyaareed uu haatan qaato 5.5 milyan oo euro , waxa ayna gaarsiinayaan 7.5-milyan oo euro .
Real ayay ka go`an tahay in ay maraan waddo waliba oo ay ku helayaan saxiixa Gareth Bale si uu jawaab ugu noqdo hishiiska Barcelona ee Neymar .
Dadka ciyaaraha falaanqeeya ayaa sheegaya haddii ay dhici laheyd in Tottenham u soo bixi lahaayeen Champion-ka in ay sahal noqon laheyd in Gareth Bale ku qanciyaan in ugu yaraan hal xilli ciyaareed oo kale uu sii joogo Tottenham .
Arsene Wenger Oo Ka Doonaya Kooxda Lyon Ciyaaryahan Leh Qaab Ciyaareedka Nasri (New Nasri)
Tababaraha Kooxda Arsenal ayaa isha la raacaya ciyaaryahan cusub oo leh qaab ciyaareedka ciyaarayahankiisa hore ee Samir Nasri, kaasoo u ciyaara kooxda reer France ee Lyon.
Wenger ayaa diyaar ula ah ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara Lyon Clement Greneir lacag gaareysa £8m.
Grenier ayaa qaab ciyaareedkiisa uu aad u soo jiitay Tababaraha France u dhashay ee mudada dheer macalinka u ah Arsenal, isagoo haatan baadigoobaya ciyaaryahano tayo leh.
22-jirkan ayaa ka mid ah ciyaaryahanada da’dooda ka hooseysa 21-ka sano ee xulka qaranka Faransiiska waxaana muddo la hadal hayay inuu leeyahay qaab ciyaareedka Samir Nasri, isagoo kooxdiisa gool u dhaliyay habeenkii axada ciyaar ay kala hortageen kooxda Rennes.
Arsene Wenger ayaa xilli ciyaareed kasta ciyaaryahano ka soo iibsanayay Horyaalka Faransiiska, waxaana labadii xilli ciyaareed ee u dambeeyay uu ka soo iibsaday ciyaaryahanadii ku kala guuleystay gooldhalinta Horyaalka Faransiiska Olivier Giroud iyo Gervinho.